MILANO VS TORINO 6-0: Kooxaha reer Milano oo 6 jeer oo ay fasalkan la ciyaareen reer Torino ka wada adkaaday! – Gool FM
(Roma) 13 Jan 2017 – Waxaa ilaa fasalkan kala barka ah dhacay 6 kulan oo dhexmaray kooxaha Milanese-ka ah iyo kuwa reer Torino, kuwaasoo 5 ka tirsani ay ka dheceen gegada San Siro, halka kulanka kale uu ka dhacay Dooxa, Qadar.
Kooxaha reer Torino ayaase 6-dii kulanba waxaa ka badiyay dhiggooda reer Milano waana arrin aan lasii saadaalinaynin ka hor bilowgii kal-ciyaareedkan.
AC Milan ayaa 2 jeer garaacday Juventus, mar horyaalka iyo mar Super Coppa ah, halka Torino ay garaacday mar horyaaka ah iyo mar Coppa Italia ah, Inter ayaa iyadna horyaalka ku wada garaacday Juve iyo Torino, taasoo ka dhigan 6-0 sida uu qorayo derbyderbyderby.it.
Intaana kuma hari doonto oo waxaa la hubaa ugu yaraan 5 kulan oo kale oo iskugu harsan labada dhinac isla fasalkan.
Georgina Rodriguez oo ku soo biirtay Twitter-ka ugana hadashay markii ugu horreeysay oo ay wax ku qorto Ronaldo!